Isbahaysiga Sucuudiga ee Yemen ka dagaallama oo xabbad joojin ku dhawaaqay - BBC News Somali
9 Abriil 2020
Weerar ka dhacay Yemen
Arbacadii, Mr Griffiths wuxuu soo dhaweeyey warka xabbad joojinta.
Waxa uu yidhi: "Dhinacyadu waa inay hadda ka faa iidaystaan ​​fursaddan oo ay si dhakhso leh u joojiyaan colaadaha oo dhan sida ugu dhaqsaha badan."
Qoraal ka soo baxay ciidamada isbahaysiga ayaa lagu yiri: "Munaasabadda qabashada iyo guuleysiga dadaallada ergeyga Qaramada Midoobay ee Yemen iyo in la yareeyo dhibaatada dadka walaalaha ah ee reer Yaman iyo in laga shaqeeyo sidii looga hortagi lahaa musiibada Corona iyo ka hortagga faafitaankiisa, isbahaysigu waxa uu ku dhawaaqayaa xabad joojin dhameystiran muddo labo toddobaad ah, oo ka bilaabaneysa Khamiista. "
Tallaabo muhiim ah
Tani waa tallaabada ugu weyn ee Sacuudigu isugu dayayo in uu ka baxo olalaha Military ee gudaha dalka Yeman .
Bayaanka isbahaysiga ayaa lagu sheegay in xabbad joojintu aan shuruudda lahayn hase yeeshee ay ku dhalisay arrintaan halista dhabta ah ee Fayrsaka corona ku hayo dalka oo nidaamkiisa caafimaadna aanu si caadi ah u shaqeyneyn.
Sacuudiga ayaa wareejiyay qalab, iyaga oo wadahadallo qarsoodi ah la yeeshay saraakiil sare sare oo ka tirsan fallaagada Xuutiyiinta si ay u sugaan amniga xuduuddooda ugana joojiyaan gantaallada ka imaanaya Xuutiyiinta isla markaana isugu dayaan in ay ka saaraan Iran.
Balse bilihii la soo dhaafay, ciidammada Xuutiyiinta aya sii waday horumar Militari, oo ay gaadheen.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in hoggaamiyaasha sare sare ee Xuutiyiinta ay taageersan yihiin in wadahadal lagu dhammeeyo colaadda.
Waxase muuqanaysa in hadii xittaa Qaramada midoobey ay bilowdo wadahadalo in talaabadaas ay qaadan doonto waqti dheer in xal laga gaadho xaaladda qallafsan ee dalka Yeman .